1. खुशीको चाड वर्षको अन्त नजिक छ। धेरै मानिसहरूले नयाँ वर्षको साँझका उपहारहरू तयार गर्दछन्। यो आफैले गर्नु पर्ने हो वा उपहार आफ्नो प्रियजनहरूलाई दिन किन्नुहोस् र धेरै आमाहरू शायद आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कूलमा साथीहरूसँग रमाईलोको लागि उपहारहरू तयार गर्दैछन्। उपहारको रूपमा वा ठाडो क्रिसमसको कुना सजाउने जुन जटिल छैन यसले दुबै दिने र रिसीभरको लागि अत्यन्तै सन्तोषजनक भावना दिन्छ।
2. उपकरण वर्ग बक्सलाई कसरी बेर्ने
3. - उपहार र्‍याप हामीले मनपराउने तरिकाले छनौट गर्नुहोस् वा दिने व्यक्तिको शैलीसँग मेल खाउनुहोस्। वयस्कहरूको लागि, साधारण र colors्गहरू छनौट गर्नुहोस्, बच्चाहरूको लागि तिनीहरू कार्टुन बान्की हुन्। वा प्यारा रंगीन बान्की - धनु वा रिबन, कागजको र colorसँग मिल्ने तरीकाले छनौट गर्नुहोस्। उही टोन वा रंग कटौती हुन सक्छ, केही मानिसहरूले सुक्खा फूलहरू, ताजा फूलहरू, वा आफैंले बनाउन सजिलो प्रयोग गर्दछन्, यो केवल अर्कै तरिकामा ठाडो छ। प्रयोग हुन सक्छ तर यदि यो वयस्क पाहुना वा मालिकका लागि हो भने, यो समय र उपयुक्तता अनुसार रंगको सरल बाकस छनौट गर्न आवश्यक पर्दछ।
4. वर्ग वा गिफ्ट बाकसमा लपेट्न सजिलो तरीका
5. - उपहार बक्सलाई र्‍यापिंग पेपरमा राख्नुहोस् जुन काटिएको छ। र बक्सको कुनाहरू दुबै पक्षहरूमा राख्नुहोस्, अनुपातमा दुबै पक्षहरूमा used प्रयोग गरिएको बाकसको शीर्ष अनुपातमा र बाकसको शीर्ष ¼ पहिलो चित्रमा देखाइएको अनुसार समान आकारको किनारहरू काट्नुपर्दछ। सफा र सुन्दरताको लागि बक्सको आकार अनुसार हामी छनौट गर्दछौं। - बक्सको आधा भाग लिन कागज लिनुहोस्। त्यसपछि गोंद वा डबल पक्षीय टेप छडी। - कागज को अर्को पक्ष गोंद संग जोडिएको ल्याउनुहोस्। वा डबल-पक्षीय चिपकने - दृढता र निश्चितताको लागि फेरि टेप गर्नुहोस् पक्कै पतन छैन - बक्स को शीर्ष। किनारहरू फिट गर्न बीचमा थिच्नुहोस्। र किनारहरूलाई राम्रोसँग तह लगाउनुहोस् - र चित्रमा जस्तै लागू गर्नुहोस् पारदर्शी टेप संलग्न गर्नुहोस् - रिबन टाँस्नुहोस् तस्वीर जस्तो। वा तपाईं मध्ये कोही यसलाई तपाइँको प्राथमिकता र रचनात्मकताको आधारमा लगाउन सक्नुहुन्न। - व्यक्तिगत प्राथमिकता अनुसार सुक्खा फूल वा ताजा फूलहरूको धनु बाँध्नुहोस्।
6. सुन्दर बक्स सजावटले परिवारमा र color र खुशी दिन्छ।
7. क्रिसमसको बखत बक्सहरू विभिन्न आकार र र in्गमा लपेट्न सकिन्छ र रूखमुनि राखिन्छ। वा उनीहरूले प्राप्त गरेको उपहार खोल्न रमाईलो गर्न बच्चाहरूको लागि बक्स भित्र धेरै उपहार राख्नुहोस्। सान्ता क्लज भएको कल्पना गर्नुहोस्। उपहार ल्याउनुहोस् धेरै रमाइलो र अर्को तरिकाले घर र परिवारको लागि कठपुतलीहरू बनाउँदै त्यो आफैंले धेरै सरल तरीकाले गर्न सक्छ, र हृदयमा लपेटिएको बक्स मायाले बनेको प्राप्तकर्ताले हेरचाह र सद्भावना अनुभव गर्नेछन्। र असीमित सिर्जना पनि त्यस पछि, हामी जस्तै उपहार बक्स बनाउनको लागि तयार होऔं !!